बिहेअघि शरिरिक सम्पर्क गरेको थाहा हुन्छ कि हुँदैन ? - हरियाली नेपाल
बिहेअघि शरिरिक सम्पर्क गरेको थाहा हुन्छ कि हुँदैन ?
Post published:२४ भाद्र २०७८, बिहीबार १२:१६
काठमाण्डौः महिलाले विवाहअगाडि यौनसम्पर्क राखे/नराखेको कुरा थाहा पाउन सामान्य मान्छेले पहिलो यौन सम्पर्कको बेला रगत आएरनआएको वा दुखेरनदुखेको कुरालाई आधार मानेर हेर्ने, सोच्ने र बुझ्ने गरेको पाइन्छ । अर्का्तिर पुरुषमा लिंगको अगाडिको छाला फाटेर नफाटेको, पछाडिसम्म खुलेर नखुलेको आधारमा यौनसम्पर्क भएरनभएको आधारमा मूल्यांकन गर्ने गरिएको पाइन्छ ।
त्यस्तै पुरुषको लिंगको छाला यौनसम्पर्क पछिमात्रै फाट्छ वा खुल्छ भन्ने कुरा पनि सत्य होइन । त्यसकारण विवाहअगाडि यौनसम्पर्क राखेर नराखेको कुरा स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा सेक्स गर्ने व्यक्तिबाहेक अरूले पछि थाहा पाउन सक्दैन ।
जसरी आवश्यक भएको बेलामा योनी खुकुलो हुन सक्ने कुरा वैज्ञानिक सत्य हो, त्यसै गरी यौनसम्पर्कपछि योनीले आफ्नो पुरानै तनाव र आकार ग्रहण गर्ने कुरा पनि वैज्ञानिक सत्य हो । यसका लागि एउटा उदाहरण दिँदा कुरा बुझ्न अझ सजिलो होला । ठूलो गाँस खाना खाएर मुख वा खाएको कुरा पेटसम्म लैजाने खाद्यनली खुकुलो वा ठूलो हुन्छन् र रु हुँदैनन् नि । त्यसैले यौनसम्पर्कपछि योनी खुकुलो हुँदैन ।एजेन्सीको सहयोग
गर्लफ्रेण्डलाई भन्न नहुने ३ कुरा
कुखुराको जोडी चल्लालाई ५ हजार !
२७ भाद्र २०७७, शनिबार २१:२७
हस्तमैथुन स्वस्थ्यका लागी कति उपयुक्त ? हस्तमैथुनले हानी गर्छकी फाईदा । जानीराखौं
१८ असार २०७८, शुक्रबार ११:१७